Thursday November 08, 2018 - 18:10:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Alkataa'ib, garabka warbaahineed ee Xararakada Al-Shabaab ayaa soo saartay filim la daawan karo muddo hal saac ah, kaas oo lagu soo bandhigayo dhabagalkii weynaa ee horaantii sanadkan ka dhacay wadada u dhexeysa Jowhar iyo Muqdisho gaar ahaan ag
Filimku wuxuu soo tabinayaa sida dagaalyahanada Al-Shabaab cagta u mariyeen kolonyadii Shisheeye, una burburiyeen gaadiidkooda iyo gurmadkii ay wateen.
Waxaa sidoo kale lagu arkayaa filimka dadka deegaanka oo weerarka ka dib loo fasaxay in ay daabushaan Sahaydii ay ka carareen ciidamada Shisheeye oo u badneyd raashiin iyo dawa.
Meydadka ciidamada shisheeye oo daadsan bartamaha wadada, askar cagahooda ku baxsanaya iyo gaadiid saf dheer kujira oo wada gubanaya ayaa ka mid ah muuqaalada lagu arkayo filimka.
Dhabagalka ka dib, waxay ciidamada Al-Shabaab dagaal xoogan ku qaadeen degmada Balcad, waxayna la wareegeen xarumihii maamulka. Waxay jeexjeexeen calanka Buluuga ah oo ay ku tilmaameen astaan laga soo minguuriyey aadna ugu eg shicaarkii uu watay talyaanigii gumeysan jiray wadanka ka hor xurnimadii.
Inta uusan filimku u daadegin soo gudbinta kamiinkii Balcad, wuxuu isdul taagan kooban oo qiimo badan ku sameynayaa sooyaalka taariikheed ee jihaadka Soomaaliya, halgamayaashii hormuudka ka ahaa sida Sayid Muxamad Cabdulle Xasan, Sheykh Xasan Barsane, iyo Sheykh Bashiir Yuusuf.
Wuxuu filimku tilmaamayaa in halgamayaashii hore ay la dagaalameen gumeystihii talyaaniga iyo Ingiriiska iyo calooshood u shaqeystayaal Afrikaan ah, iyo kuwo dabadhilif ah oo iibsaday diintooda iyo dadkooda.
Wuxuu tibaaxayaa in maantana ay Xarakadu la dagaalameyso caruurta gumeystihii hore oo wata dabadhilifyo Soomaali ah iyo Afrikaan calooshood u shaqeystayaal ah.
Inkastoo badanaa muuqaalada Al-Shabaab looga bartay Anaashiida Jihaadiga iyo gabayada carbeed, hadana muuqaalkan waa mid gabi ahaanba ka duwan kuwii hore. Wuxuu diiradda saarayaa suugaanta Soomaalida gaar ahaan gabayadii kululaa ee Sayidka ee ku baaqayey Jihaadka iyo gobanimada.
Waxaa filimka marti ku ah oo ka qeyb qaadanayaa mas’uuliyiin ka tirsan Xarakada, taariikhyahano, Abwaano iyo odayaal dhaqameedyo, wuxuuna si qoto dheer uga faaloonayaa Jihaadkii uu Sayid Maxamed Cabdulle Xasan la galay Ingiriiska iyo dabadhilifyadii kaabayey, waxayna isbar bar dhig ku sameynayaa dabadhilifyadii xilligaa garab taagnaa gumeystaha iyo kuwa maanta kaabaya shisheeyaha.
Fariinta uu xambaarsan yahay.
Filimkan wuxuu ku baxayaa saddex Luuqadood oo kala ah, Carabi, English iyo Soomaali, wuxuuna xambaarsan yahay fariin guud oo ku wajahan dhinacyo kala duwan.
Wuxuu dadka Soomaaliyeed xusuusiyey inaanu jirin farqi u dhexeeya gumeystihii hore iyo midka maanta, halgankuna yahay isla midkii shaley, iyagana looga baahan yahay in ay ka dhiidhiyaan gumeysiga, ka qeyb qaataan Jihaadka, taariikhdooduna ku diiwaan geliyaan saxfad cusub oo xambaarsan cizzi iyo sharaf.
Wuxuu filimku sidoo kale gudbinayaa fariin ah in maamulada taagta daran ee uu shisheeyuhu ka hirgeliyey Soomaaliya ay yihiin aalado uu gumeystuhu u isticmaalo hirgelinta damacyadiisa, ayna taariikhdu gelin doonto isla baalkii ay ku diiwaan gelisay dabadhilifyadii iyaga ka horeeyey garab taagnaa gumeystihii Ingiriiska iyo talyaaniga.
Awoodaha reergalbeedka ayuu sidoo kale filimku xusuusiyey dagaallo iyo duullaano uurkutaallo ku ahaa ciidamadooda oo lagu laayey askar iyo Saraakiil badan, sida dagaalkii dhacay 1913-kii ee lagu dilay Generaalkii ciidamada Ingiriiska Richard Corfield kaas oo ay gobolada waqooyi ku dileen ciidamadii daraawiishta ee sayid Muxamed Cabdulle Xasan.
Wuxuuna markale xusuusiyey in Soomaaliya ay weli ka jihaadayaa dhasha halgamayaashii hore ee afka ciidda u daray damacyadooda.
Ka Daawo Facebook Filimka Oo Somali Ah
Halkaan Ka Degso Filimka oo tayo sare ah
Isha Muuqaallada: Alkata'ib Media